TASTIN' FRANCE ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ - La France en Birmanie
ကြိုဆိုခြင်း > သတင်းများ > ပြင်သစ်သံရုံးမှ သတင်းများ > TASTIN’ FRANCE ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ
ပြင်သစ်သံရုံး၏ ပြင်သစ်ကုန်သွယ်ရေးဌာန Business France မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝိုင်ဈေးကွက်ကို မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် ပြင်သစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူများကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ TASTIN’ FRANCE ကို April ၅ ရက်နေ့က ကြိုဆိုခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် April ၆ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Novotel Hotel ရှိ Le Celier restaurant တွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦးပါဝင်သော ၄င်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဝိုင်ကဏ္ဏတွင်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသောဝိုင်တင်သွင်းသူများ၊ ဖြန့်ချီသူများ၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်များမှ တာဝန်ရှိသူများအား ၎င်းတို့၏ ဝိုင်အမျိုးအစားအစုံအလင်ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြသည်။
ထိုပြင်သစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက ပြင်သစ်ကုန်သွယ်ရေးဌာန Business France , rangoun@businessfrance.fr နှင့် ဖုန်း.၀၁ ၂၃၀၂၁၆၈ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Business France, the French trade commission of the Embassy of France welcomed the « TastIn’France » delegation on Thursday, April 5th forapresentation of Myanmar market in the Wine industry.
On April 6, the 12 Wine producers and traders composing this delegation had the opportunity to present their products to key players in Myanmar (Importers, Distributors, Hotels, Restaurants.) duringaTasting operation at the « Le Cellier », one of the Novotel Yangon Max restaurants.
To know more about these companies, do not hesitate to contact our Business France team at rangoun@businessfrance.fr, or by phone +95 (0)1 230 2168.